DEG DEG:- Mid ka mid ah raggii hoobiyeyaasha ka dhex tuuray magaalada Muqdisho oo gacanta lagu dhigay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Mid ka mid ah raggii hoobiyeyaasha ka dhex tuuray magaalada Muqdisho oo gacanta lagu dhigay
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaaliya gaar ahaan kuwa NISA ayaa goordhaw gacanta kusoo dhigay nin la sheegay inuu ka mid ahaa rag hoobiyeyaal ka dhex tuurayay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Ninkaasi ayaa la qabtay kadib markii dadka shacabka ah ee ku nool degmada Wadajir ay ciidanka NISA kusoo wargeliyeen seddax nin oo hoobiyeyaal degmadaasi ka dhex tuurayay, waxaana markaasi kadib suurto-gashay in mid ka mid ah raggaasi gacanta lagu soo dhigo.
Ciidanka NISA ayaa sidoo kale dilay mid kamid ah raggii hoobiyeyaasha tuuray, kadib markii iska caabin ay la kulmeen ciidamadaan, waxayna ciidankaasi sidoo kale qabteen gaarigii ay wateen raggaasi iyo sidoo kale hub uu watay ninka gacanta lagu dhigay.
Ninka seddaxaad ayaa la sheegayaa inuu cararay islamarkaana galay guri ku yaalla xaafadda Ceelqalow ee degmada Wadajir, iyadoona ciidanka NISA ay haatan ku hareersan yihiin guriga ninkaasi uu galay.
Dhinaca kale, guddoomiyaha degmada Wadjir ee dowladda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saacadaha soo aadan ay saxaafadda usoo bandhigi doonaan ninka la qabtay, kan la dilay iyo sidoo kale hubka la haayo.
“Madaafiic ayaa laga dhex tuuray magaalada, waxaa hadda socdo howlgal, nimankii wax tuurayay mid ka mid ah waa la dilay, midna gacanta ayaa lagu haayaa, sidoo kale mid ah nimankaasi wuxuu galay guri, halkaas ayuuna wax kasoo dhex tuurayaa, ciidankana howlgalka weli way wadaan, oo ninka guriga uu ku jiro ayeey ku hareeresan yihiin” Sidaas waxaa yiri guddoomiyaha degmada Wadajir.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in ciidanka NISA ay soo afjaraan howgalka ay ka haayaan guriga uu ku dhex jiro mid ka mid ah raggii hoobiyeyaasha ka dhex tuuray degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.